THBP: ထီပေါက်နိုင်ရေ အခွင့်အလမ်း (ရခိုင်သမများ အတွက်သာ)
အေပို.စ်ကို ရွီးဖို.လို.မှန်းနီစော် ကြာဗျယ်။ စာမလုပ်ဖြစ်သိခါ တွက်စရာ ချက်စရာချေတိ မလုပ်နိုင်သိလို.မရွီးဖြစ်။
အဂု အကျွန်တွက်ပြချင်စော်ကတော့ခါ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ရုန်းကန်နီရရေ ရခိုင်သမ တစ်ယောက်အနီနဲ. သင့်တော်ရေ ရခိုင်သားတစ်ယောက်တွိဖို. ဇာလောက်ခက်ခဲလေဆိုစော်ကို ပြချင်လို.ပါ။
ရခိုင်သမချေတိ အလုပ်ထွက်လုပ်တေဆိုခါကပင် ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ပညာမတတ် စာမတတ် ထွက်လာရေလူရှားပါရေ။ ဘွဲ.ရပညာတတ်ပြီးကေ လခသင့်တင့်ရေ အလုပ်နဲ. အိနြေ္ဒရရ အလုပ်လုပ်နီကတ်စော်များပါရေ။ မဟုတ်ကေလေ့ နာစ့်အကူ အနိမ့်ဆုံး ထားပြီးကေ တဖြည်းဖြည်းနဲ. တက်လမ်းရှာနီကတ်စော် မမချေတိ အများကြီးရှိပါရေ။ အကျွန်ရို.မမချေတိ မှာ အကျင့်တစ်ခုက ကိုယ့်ထက် ပညာရေးမှာသာရေ လူကိုပဲ အထင်ကြီးပြီးကေ ယူချင်စိတ်ရှိရေ။ အကျွန်လေ့ ယင်းပိုင်။ တခြားမမချေတိလေ့ ယင်းပိုင်ရှိဖို.လို.ထင်ရေ။ ကိုယ့်ထက်မသာကေတောင် တန်းတူရှိရဖို.။ ယင်းချင့်စော် ရခိုင်သမတိ သွီးကြီးစော်မဟုတ်။ ကမ္ဘာပြတ်သား မမတိယင်းပိုင်ရှိဖို.။ ယောက်ျားချေတိကလေ့ ကိုယ့်ထက် ပညာရေးအရသာရေ မမချေတိကို ဆိုကေ မလိုတတ်ကတ်ပါ။ အဓိက က ယောက်ျားမာနကို ထိခိုက်တေ ထင်ပါရေ။ မမချေတိကတော့ ပညာနဲ.ဥစ္စာ နှစ်ခုကို အဓိက ထားတတ်တေ။ ရုပ်ရည်က နောက်ဆုံးကပါ။ ယင်းချင့်လေ့ လူ.သဘာဝ။
ဆိုရေခါ ဘွဲ.ရ ပညာတတ် အေမှာ အလုပ်လုပ်နီရေ မမချေတယောက်ဆိုလိုက်ပါဖိ။ ရခိုင်သားကိုပဲ ယူဖို.လို. စိုင်းစားထားရေ မမချေတစ်ယောက်အတွက် ရခိုင်သား ကကောင်းမမွန်ချေ တစ်ယောက်ကို ရဖို. အခွင့်အရေးကို တွက်ကြည့်ကတ်ပါမေ။
ဥပမာ - စင်္ကာပူ
စင်္ကာပူကိုလာရေ ရခိုင်သား ၁၀၀၀မှာ ၆၀၀ စော် အလုပ်ကြမ်းနဲ.လာရစော်များပါရေ။ အေချင့်ကို ပြောလို. နှိမ်စော်မဟုတ်ပါနန်း။ အကျွန်.သူငယ်ချင်းတိထဲမှာ ယယိုင်ကျကျေး သသိပ်ပပိတ်နဲ. သင်္ဘောကျင်းမှာလုပ်ပြီးကေ အိမ်ကမိဘကို အကျွန်ရို.ထက်အဆ ဖေ့သာပို.လို. ရန်ကုန်မှာ အိမ်ဝယ်ထားစော်လူတိ မကန်ပါ။ တချို.က ဘွဲ.ရဖြစ်ယင့်ပင် အဆင်မသင့်လို. အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သင်္ဘောကျင်းမှာ Construction တိမှာ လုပ်နီရစော်လူတိ အပုံရှိပါရေ။ ယင်းလူတိကို အုပ်စု (A) လို. သခေါ်လိုက်ပါမေ။ နောက်ထပ် ၂၀၀လောက်က တစ်ဆင့်တက်ပြီးကေ စက်ရုံမှာ စူပါဗိုက်ဆာ အဆင့်၊ Construction မှာ ဖိုမန် အဆင့်တိ နဲ.လုပ်နီဂတ်တေလူတိ ရှိပါရေ။ သူရို.လခကို အထင်မသေးပါကေ့။ လုပ်သက်နဲ. ရထားရေလူတိဖြစ်တေအတွက် ကိုယ့်ထက် လခ အများကြီးကောင်းပါရေ။ အုပ်စု (B) လို.ထားလိုက်ပါမေ။ နောက်ထပ် ၁၅၀ လောက်က အင်ဂျင်နီယာရို. အိုင်တီရို. အကောင့်တန်.ရို. အော်တိုကဒ်ရို.နဲ. အလုပ်လုပ်စော်လူတိ ရှိပါဖို.။ အုပ်စု (C)ထဲမှာထည့်လိုက်ပါမေ။ နောက်ထပ်၅၀ ကို (သေချာပါရေ ၅၀မပြည့်ပါ) ကျောင်းသား သို. အေက ဘွဲ.ရပြီးကေ အလုပ်လုပ်နီရေလူတိထဲမှာ ထည့်လိုက်ပါမေ။ အေချင့်ကတော့ အုပ်စု (D) ယင်းပိုင်ဆိုကေ လူတစ်ထောင်ထဲက မှ တခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားရဖို. အချက်အလက်တိကို ဇယားချေနဲ. အေပိုင်ချရွီးလိုက်ပါမေ။
ယင်းဇယားကိုအခြေခံပြီးကေ Probability ဖော်မြူလာနဲ.တွက်လိုက်ဖို.ဆိုကေ မမချေတစ်ယောက် ရည်းစားရှာရေခါ
၁။ လပျိုနဲ.ရနိုင်ရေ အခွင့်အလမ်း ဇာလောက်ရှိလေ ? (ရည်းစားလက်ရှိနဲ. တခုလပ် မုဆိုးဖို အိမ်ထောင်ရှင် တိမပါ)
Probability = ၃၁၀/၁၀၀၀= ၀.၃၁ x ၁၀၀% = ၃၁ %
၂။ အနည်းဆုံး အုပ်စု (B)လောက်က လူနဲ. အထက်ကို (လူပျိုထဲက) လိုချင်ေ၇ ဆိုကေ အခွင့်အလမ်း ရဖို.ရာခိုင်နှုန်းဇာလောက်ရှိလေ ?
Probability = ၁၁၀/၁၀၀၀= ၀.၁၁ x ၁၀၀% = ၁၁ %၃။ လူပျိုလူလွတ်ထဲကမှ အုပ်စု (C) နဲ. (D) အထဲက ပဲ လိုချင်ရေ ဆိုကေ ဝါ။
Probability = ၇၀/၁၀၀၀= ၀.၀၇ x ၁၀၀% = ၇ %
၄။ လူပျိုတိအပြင် ရည်းစား လက်ရှိတိကို ပါထည့်စဉ်းစားဖို. ပြတ်လားဂေဝါ ရည်းစားနဲ. ဆိုကေ
Probability = ၅၂၀/၁၀၀၀= ၀.၅၂ x ၁၀၀% = ၅၂ %
အေပိုင်ဆိုကေတော့ နည်းနည်းအခြေအနေ ကောင်းလားရေ။
ယဂေလေ့သင့် ယင်းချင့်စော် အခြေအနေ မှန်လာ။ ပီးထားရေ ဒေတာ တိစော် ခန်.မှန်းရာ ဖြစ်ပြီးကေ အတိအကျ မဟုတ်ပါ။ အားလုံးအလုပ်လုပ်နီစော် လူထဲမှာ လူပျိုလူလွတ်နည်းပြီးကေ အိမ်ထောင်သည် ရည်းစားရှိရေလူတိ များပါရေ။ ရည်းစားထားရေ အိမ်ထောင်ပြုရေဆိုစော်မှာ လူပျုိုတိုင်းကို မျက်စပစ်လို.ရစော်ကမဟုတ်။ ကိုယ့်ကိုကြိုက်ဖို.လိုသိရေ။ ကိုယ်ကလေ့ နည်းနည်းပြန်ကြိုက်ဖို.လိုသိရေ။ အကျင့်စရိုက်ချေ ကောင်းဖို.ကလေ့ လိုသိရေ။ မိဘ အသိုင်းအဝိုင်း ဘက်ဂရောင်းချေကလေ့ ကြည့်ဖို.လိုသိရေ။ ရည်းစားထားစော် အလွယ်ချေဆိုကေ တောင်မှ အိမ်ထောင်ပြုစော်က အခက်ကြီးပါ။ ရည်းစားဖြစ်တိုင်း အိမ်ထောင်ကျဗျယ်လား ယဂေ။ ရည်းစားသည် ခင်ပွန်းလင်မဟုတ်။ လင်ဖြစ်လာဖို. Probability ရှိနိုင်ရေ လူတစ်ယောက်ရာဖြစ်တေ။ အချစ်ဦးနဲ. ယူဖြစ်တေ လူဇာနှစ်ယောက်ရှိပါလေ။ ရှားပါရေ။ ဒုတိယ သို. တတိယ တစ်ယောက်နဲ.မှ တတည့်တည့်ကျလားစော်တိရှိပါရေ။
Relationship တိ ရှိလာရေ အခါ များသောအားဖြင့် ၂ ယောက်မြောက်လူ၊ သို. သုံးယောက်မြောက်လူနဲ. အဆင်ပြေလားစော်များပါရေ။ ယင်းပိုင်ဆိုဂေ Relationship လုပ်တေအခါလူအများစုဧ။် အိမ်ထောင်ကျကိန်း Probability ရေ ၀.၃၃ ရှိရေ ဆို ကတ်ပါမေ။
( ၃ယောက်မြောက်နဲ.လက်ထပ်ဖြစ်တေလူများရေ ဆိုရေ သဘော)။ ပထမဆုံး ထားရေ ရည်းစားနဲ. ရဖို. Probability ဇာလောက်ရှိပါဖို.လေး။ အကျွန်ရို. Bernoulli Random Variable of Probability Formula မော်ဒယ်ကို သုံးကြည့်ကတ်ပါမေ။
P (N=1)= (1/3) (2/3)^1-1= 1/3= 0.33
ဂဏန်းငယ်ရေ အတွက်နဲ. Common Sense နဲ. ရရိုးချေတွက်ပစ်ကေလေ့ ရပါရေ။ ပထမ တစ်ယောက်နဲ. ရဖို.အခွင့်အရေးသည် ၃၃% ရာ ရှိပါရေ။ ဒုတိယ တစ်ယောက်နဲ. အိမ်ထောင်ကျကိန်းဆိုကေ
P (N=2)= 1-P(N=1) = 1 - (1/3) = 2/3= 0.67 = 67
အေမော်ဒယ်ကို သုံးစော်မှာ အပြစ်ပြောလို.ရစော်တိ ရှိပါရေ။ Pass/Fail ပုံစံမျိုးရာ သုံးရေ မော်ဒယ် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ခြေ ၃ ခု ရှိရေ ကိစ္စ မှာ အကောင်းဆုံး Represent လုပ်ချင်မှ လုပ်နိုင်ပါဖို.။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်လိုချင်စော် ပွိုင့်ကို ရလားပါဗျယ်။ ပထမ ရည်းစားတစ်ယောက်နဲ. အ်ိမ်ထောင်မကျကေ ဂါ။ အခွင့်အလမ်းတိ ပိုလို.နည်းလားဗျယ်။
ကိုယ့်ကို ကြိုက်လာရေ လူတိုင်းကိုလေ့ ကိုယ်က သဘောမကျ။ ကိုယ်ကြိုက်တေ လူကလေ့ ကိုယ့်ကို ပြန်မကြည့် ဆိုကေ မမချေတိ မှာ ရခိုင်သားကကောင်းမမွန်ချေ တစ်ယောက်နဲ. အိမ်ထောင်ကျဖို. အရေးစော် ကောင်းခက်ခဲပါဖို.ဂါ။ တစ်ခုကောင်းစော်က နိုင်ငံခြားကို ရောက်နီရေ လူတိထဲမှာ ယောက်ျားချေတိက လူများစု ဆိုရေ ခါ သူရို.ခမာတိထက်တော့ ကိုယ်က ပိုလို. အရွီးရ နည်းနည်းလွယ်ပါဖို.ထော။ မမချေတိ ဖက်က ကောင်း ကွန်ပလိန်းလေ့ မတက်နိုင်။ ယောက်ျားချေတိ ဖက်ကလေ့ ရခိုင်သမ မယားတစ်ယောက်ရဖို. ယလောက် လွယ်ဖို. မဟုတ်။ ပိုလို.ရာခက်ဖို.။ ယဂေလေ့ ကိုယ်ပြည် မှာ ပြန်ယူဖို.ဆိုကေ အပုံကြီးပါ။ နိုင်ငံခြားပြန် ဆိုစော်နဲ. ကွမ်းသီးတော သဌေးသမီးရှင်တိ ဝယ်ဖို. ရောက်ဖို.စော်မှာ မပြောကေ့။ ကောင်းစိတ်ပူစရာတော့ မရှိပါ။း) ယောက်ျားချေ တော်တော်များများကလေ့ စင်္ကာပူမှာ ရောက်နီရေ ရခိုင်သမတိကိုဆိုကေ လလွဆာလို. ရွာပြန်လို.ရာ ယူမေ လို.ပြောကတ်ပါသိရေလေ။ စလုံးက စော်တိ ကိုဆိုကေ ထားရာထားလို. ကွမ်းတံထွီး ပက်ပက်နဲ.ပင် အရှင်လလတ် ကိုယ့်ရှိက ပြောစော် ရခိုင်သားတိနဲ. တွိဖူးပါယင့်။ စေတနာမထားဆိုကေလေ့ စိတ်ပုတ်တေ ပြောကတ်ဖို.ဒေဂါး။
အဂုခေတ်မှာ ကောင်းရေ လို.ပြောရဖို.လား ဆိုးရေလို.ပြောရဖို.လား အွန်လိုင်းက ကြိုက်ကတ်စော်တစ်ခု ပေါ်လာပါရေ။ ရစော်လူနဲ. ကြူစော်ကို အားမပီးကေလေ့ ကောင်းစော်အချက်ချေတိကို ပြောပြပါမေ။
ကိုယ့်ရခိုင်အချင်းချင်း အွန်လိုင်းက အသိအကျွမ်း ဖွဲ.စော်ကို လက်ခံပါရေ။ ယဂေလေ့ မမ ကျွန်တော် ရည်းစားလိုချင်လို.ပါ ရပါဖို.လား ဆိုကေတော့ တစ်ခါတည်း ဘန်းပလိုက်ပါရေ။ အပြောအဆိုချေတော့ စကေတဗွေ လိမ္မာဖို.လိုရေ ဆိုစော်ကို သတိပြုရပါဖို.။ ယယိုင်ကျကျေးပြောကေ ဇာရခိုင်သမမဆို ရခိုင်သားဆိုကေ လက်ခံ စကားပြောပါရေ။ စခါကပင် ဆင်နဲ.နင်းလို.ဝင်ပိုင် မဝင်ဘဲနဲ. ရင်းနှီးအောင် အယင်လုပ်ရရေ ဆိုစော်ကို သတိထားကေဗြီးပါဗျယ်။ မထိတထိ ဗမာပိုင် ကြူသလိုလို စသလိုလိုပြောခြင်း၊ မိန်းလေးကသိပ်လှတာဘေး၊ သိပ်ကျတ်သရေရှိတာပေးစသည်ဖြင့် မြှောက်ပင့်ပြောခြင်း တိရေ Self Suicide လုပ်နီရေ ဆိုစော်ကို သတိရပါ။
ချစ်လို. ကြိုက်လို. ဝါ ရလားလို. မီးကေ ရရေ လို.ဖြေပါမေ။ ဇာဖြစ်လို.လဲ ဆိုကေ ကိုယ့်ရခိုင် အသိုင်းအဝိုင်းစော် အငယ်ချေပါရာ။ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို အချိန်မရွေး စုံစမ်းလို.ရပါရေ။ ယင်းလူရှရှုပ်ပပွီ ဟုတ်မဟုတ်။ မိသားစု ဘက်ဂရောင်းကို တစ်ပတ်မကြာ အားလုံး သိရပါရေ။ အချင်းချင်းဆက်နွယ်နီစော် လူတိပါရာ။
မမချေ ယောက်ျားချေတိ အတွက် ရွီးစရာ Option တိ များလားပါရေ။ ပြည်တွင်းက လူတိနဲ.ပါ အဆင်ပြေပြေ ကြူလို.ရရေအတွက် သမီးရည်းစား ရှိပြီးသားလူတိမှာလေ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်လားအောင် ထိမ်းထားလို.ရရေ။
ကိုယ့်အချင်းချင်းကလွဲပြီးကေ ကျန်စော် လူမျိုးတိနဲ. ဆိုကေတော့ ရည်းစားသနာ အွန်လိုင်းက ဖြစ်ဖို. ယက်ဖို. အားမပီးပါ။ ဇာကမှန်းမသိ၊ ဇာပိုင်မှန်းမသိ၊ ဇာသူ.သားသမီးမှန်းမသိပဲနဲ.။ အပျော်အပျက်သမားတိ များစော်ပါရာ။
ယလောက်ဆိုကေ အေတော့ပစ်ကို လက်စဖြတ်လို.ရဗျယ်ထင်ရေ။ သူငယ်ချင်းံမမချေ တစ်ယောက် ရခိုင်သားတိ ရွီးရခက်ကြောင်းညီးညူနီရေ။ ရုပ်လှ ပညာတတ် ဖေ့သာရှိ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်း နဲ. ရခိုင်သားချေတစ်ယောက် ရဖို. အရေးစော် ၂% လောက်ရာ ရှိကေလေ့ အတတ်နိုင်ဆုံး လက်မလျှော့ပါကေ လို.ပြောချင်ရေ။ အချိန်တန်ကေ နပိန်ကန်လားပါလိမေ။ (အရာ နသိုးကြီးကန်လားဂ ဒုက္ခ) စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ. စောင့်ဖို.ရာလိုရေ။ စိတ်မရှည်ကေ ဖွင့်ပြောပလိုက် (ကိုယ်သဘောကျလူရှိကေ ပြောစော်ရာ) ။ အယင်တရက် က ထမင်းချက်စားကတ်ခါ ပြောဖြစ်စော်ချေတိကို သတိရလို. ရွီးလိုက်စော်ပါရာ။ အကျွန်နဲ. မြတ်ရှင်ကတော့ ထီပေါက်ထားဗျယ် (ထီလက်မှတ်ကို အသေအချာသိမ်းထားပါရေ မပျောက်အောင်) ဖြစ်တေအတွက်နဲ. ယင်းသူငယ်ချင်းံ တစ်ယောက် အယင်ဆုံး သူချစ် ကိုယ်ချစ် ရခိုင်သားချေ တစ်ယောက်ကို ရပါဇီလို. ဆန္ဒပြုလိုက်ပါယင့်ဂါး။း)